K.Khongsub – Page2– Myanmar Live
Thailand 101 / ထိုင်း / လူနေမှုပုံစံ / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး / မြန်မာ
ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကမ်းထိတန်းရှည်လျား မြန်မာညီအစ်ကိုမောင်နှမလုပ်သားများပထမဆုံးအကြိမ်တန်းစီပြီး ‘Thailand 101’ ရယူခြင်း
April 1, 2019 May 3, 2019 - by K.Khongsub
မနက်ကနေနေ့လည်ထိ ၃ ရက်စလုံးစည်ကားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် Myanmar Live အဖွဲ့သားများကနေ တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်-မြ၀တီလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဂိတ်ရှေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများသိသင့်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစုံလင်အောင်စုစည်းထားတဲ့ …
၁ ကနေ ၃ ရေပြီး ‘Thailand 101’ အလွယ်တကူ အခမဲ့ရယူလိုက်ပါ တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်-မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ် မတ်လ ၂၇ နေ့စတင်မည်
March 21, 2019 May 3, 2019 - by K.Khongsub
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုအခုမှဝင်-ထွက်တဲ့မြန်မာလုပ်သားများဖြစ်စေ ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနေကြာတဲ့သူဖြစ်စေ အားလုံး သိထားတဲ့အတိုင်း လုံဝပျောက်လို့မရတဲ့ Passport နဲ့ Work permit အပြင် …
ကမ္ဘာ့သတင်း / ကျန်းမာရေး / သတင်းများ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် PM2.5 ဖုန်မှုန့်ထက်ဆိုးရွားပြီး တောင်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသထက်အေးမြသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့နေရ !!!
January 31, 2019 January 31, 2019 - by K.Khongsub
ယခုလက်ရှိမှာဆိုလျင် အာရှတိုက်မှ နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ PM2.5 လေထုညစ် ညမ်းမှုပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြို့တော်မဟာဘန်ကောက်တွင် စာသင်ကျောင်းများကိုအရေးပေါ်ပိတ်လိုက်ရသည့်တိုင်အောင် လေ …
ကျန်းမာရေး / ထိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း
ကွန်ဒိုဆောက်လုပ်စဉ် ကရိန်း (Crane) ပြိုကျခြင်းမှ သေဆုံးမှုကို လူမှုဖူလုံရေးရန်ပုံငွေရုံးက ဘယ်လောက်လျော်ပေးသလဲ ?
January 30, 2019 January 30, 2019 - by K.Khongsub
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့က ဖရလမ်ဆမ်(၃) လမ်းနားကဆောက်လက်စ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒိုတစ်ခု၌ ကရိန်းပြိုကျခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် လူ ၅ …
ကျန်းမာရေး / ထိုင်း / သတင်းများ
စမွတ်ဆာခွန်နယ်မြေ လူနေအိမ်ယာ နှင့် စက်မှုဇုန် များကြား ပြန့်နှံ့နေသည့် PM2.5 လေထုညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာကို မီးသတ်ပိုက်ဖြင့် သေချာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေ!!
January 24, 2019 January 24, 2019 - by K.Khongsub
ဖလမ်ဆောင်(ရာမ-၂)လမ်းမကြီး၏ လမ်းသွယ်ဖြစ်သည့် အေကချိုင်လမ်းမ (Ekkachai) ပေါ်တွင် PM2.5 လေထုညစ်ညမ်းမှုအားဖြေရှင်းရန်LUF 60 မီးသတ်ကားများသုံး၍ ရေဖျန်းပက်ခြင်းဖြင့် …
မလိုအပ်လျှင်ရှောင်ပါ အမြန်လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဖရလမ်ဆောင်(ရာမ-၂) လမ်း အချို့အပိုင်းကို ၃ လကြာပိတ်ထား
January 22, 2019 January 23, 2019 - by K.Khongsub
အမှတ် ၅၃ လမ်းမကြီးဖြစ်သော ဖရလမ်ဆောင်(ရာမ-၂)လမ်းမကြီးအား အမြန်လမ်းဦးစီးဌာန(Department of highway) မှ မြေအောက်ရေပိုက်လိုင်းများပြန်လည်နေရာချပြုပြင်ပြီး ကတ္တရာလမ်းပြန်ခင်းမည်ဖြစ်ပါ …